paprika နှင့်အာလူးပါသောပေါ်တူဂီကော့ဒ် | မီးဖိုချောင်သုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ငါ့ကို encanta ပေါ်တူဂီအားလုံးအထက်, သူတို့ရဲ့အစားအစာ။ ထိုတွင်သင်သည်ကမ္ဘာ့အရသာအရှိဆုံးကော့ဒ်ကိုမြည်းစမ်းနိုင်သည်။ ကော့များအတွက်မည်သည့်နည်းကိုမဆိုအခြားသူများနှင့်မတူပါ။ ဒီတော့ဒီနေ့ဒီပန်းကန်ကိုငါတင်ချင်တယ် paprika နှင့်အတူကော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန့်ညက်များအတွက်စိတ်ကူး ခရစ်စမတ်, အလွန်ကြွယ်ဝသောခရစ်စမတ်မီနူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် စီးပွားရေး။
ဒီစာရွက်အတွက်ငါတို့သုံးသွားမှာပါ desalted ကော့။ သင်ကိုယ်တိုင်၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့) ဆားလက်ျာဘက်၌ရှိသောခါးများကိုဝယ်ယူနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မာကာဒါနာရှိသူများနှင့်တူသည်) ။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်သန့်စင်ရန်ရွေးချယ်ပါက၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံး ၄၈ နာရီ၊ ရေကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။3ကြိမ် နှင့်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာစောင့်ရှောက်ခြင်း။
ငါတို့ကော့ဒ်ကိုမီးဖို၌အပြီးသတ်မည်ဖြစ်သောအာလူးကြော်အချို့နှင့် တွဲ၍ သွားမည်။ ဤစာရွက်၏နောက်ဆက်တွဲကိုသင်သိလိုပါသလား။
1 ပါဝင်ပစ္စည်းများ (4p)
ကြော်အတွက်ဆီ 200 ဂရမ်
paprika ၏ 1 ကြီးမားသောဇွန်း
ဝိုင်ဖြူ 50 ml
ရေ 50 ml
piquillo ငရုတ်ကောင်း strips တွေထဲသို့ခုတ်ဖြတ်
အာလူးတွေကို Omelette လိုဖြတ်လိုက်တယ်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆီကို ၂၀၀ ဂရမ်ခန့်ကိုမီးဖိုထဲသို့ထည့်ပြီးအပူပေးပါ အလယ်အလတ်မြင့်အပူ.
ကျနော်တို့ခါးကိုမုန့်ညက်နှင့်ကြော်အတွက်ဖြတ်သန်းရတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအပြင်ဘက်မှာလှော်စေချင်ပေမယ့်အတွင်းပိုင်းမှာမလုပ်စေချင်ဘူး (သူတို့ကမီးဖိုမှာချက်ပြုတ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်) ။ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သူတို့ကိုရပါလိမ့်မယ်4မိနစ် တစ် ဦး ချင်းစီအခြမ်းအဘို့။ သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းထားတဲ့အာလူးတွေပေါ်မှာထည့်လိုက်တယ်။
ကျနော်တို့ဆီကိုဘူးထဲထည့်ပြီးဒယ်အိုးထဲ ၁၀၀ ဂရမ် / ml (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ဝက်ခန့်) ထည့်ပါ။ ကျနော်တို့ကအပူနှင့်မီးပိတ်။ ငါတို့ပစ်လိုက်တယ် ငရုတ်ကောင်း နှင့်ကောင်းစွာနှိုးဆော်။ ရေနှင့်စပျစ်ရည်များကိုဒယ်အိုးထဲသို့ထည့်ပြီး (အားလုံးမီးပြီးပြီ) နှင့်ကောင်းစွာနှိုးဆော်။ ထိပ်ပေါ်မှာအာလူးနှင့်ကော့ဒ်ထည့်ပါ။ Piquillo ငရုတ်ကောင်းများကိုအာလူးကြားတွင်မြည်းစမ်းရန်ထားပါ။
မီးဖိုကိုအပူပေးတယ် 170º (အပူနှင့်အအေး) နှင့်များအတွက်ကော့ဖုတ်ရမည် 15 မိနစ်.
ကျွန်တော့်နာမည်အိုင်ရင်း၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်မက်ဒရစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဘာသာပြန်နှင့်စကားပြန်ဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိထားပါသည်။ (ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာတွင်အလုပ်လုပ်သော်လည်း ... ပရိုဖိုင်ကိုကြည့်ရန်>
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » အထူးအခါသမယ » ခရစ်စမတ်ချက်ပြုတ်နည်းများ » ပေါ်တူဂီကော့ဒ်
အိမ်လုပ်ချောကလက်နှင့်ဗာဒံစေ့၊ ခရစ်စမတ်အချိုပွဲ ၂
စန်း jacobos, အမြန်ညစာ